आचारसंहिता जरुरी भन्दा पनि ब्लगर आफैंले चिन्तन गरेर बुझ्नुपर्ने कुरा हो: जागृती घिमिरे - MeroReport
आचारसंहिता जरुरी भन्दा पनि ब्लगर आफैंले चिन्तन गरेर बुझ्नुपर्ने कुरा हो: जागृती घिमिरे
नयाँनयाँ ठाँउ घुम्न अनि गफ गर्न मनपराउने जागृती घिमिरेको अर्को शौख भनेको फोटोग्राफी पनि हो । नयाँ कुरा सिक्न मन पराउने जागृती पढ्न पनि उत्तिकै रुचाउँछिन । भर्खरै मात्र ब्यवस्थापन संकायबाट स्नातक सकेकी जागृतीलाई अर्थशास्त्र अर्को मनपर्ने विषय हो । पढाई तथा घुमघामका अलावा उनी ब्लग लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन । मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा यसपाली हामीले उनै जागृती घिमिरेलाई प्रस्तुत गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी :
जागृति घिमिरेलाई सोसल मिडियामा के भनेर चिन्ने वा के भनेर चिनाउन चाहानुहुन्छ ? बताइदिनुस न ।
सबैले चिन्ने छुट्टै पहिचान बनाउने क्रममा नै छु । अहिलेलाई भने नामले नै चिनाउन चाहान्छु ।
ब्लगिङ गर्न कहिलेलेखि थाल्नुभयो र कसरी सुरु गर्नुभयो ?
मैले २०१२ बाट ब्लगगिङ गर्न थालेको हुँ । शुरु-शुरुमा त अरुको ब्लग नै पढ्थे । खासै लेखम्ला भन्ने सोच पनि थिएन । यतिकै लेखम् न भन्ने सोच आयो अनि लेखेँ । नियमित रुपमा त लेख्ने गर्दिन तर कहिलेकाहिँ लेखिरहन्छु।
केका लागि ब्लगिङ गर्नुहुन्छ ?
वास्तविक जिवनमा घटेका या काल्पनिक जुन प्रसंग लेखेको भएपनि म अरुको लेखहरु पढ्दा प्रभावित हुन्छु । अनी मलाई नी मेरो लेखबाट कसैले केही अनुभव गर्न सकून्, उत्साहका साथ दिन बितोस भन्ने जस्तो लगेर लेख्छु । सामान्यतया मेरो यात्रा र अर्थशास्त्रलाई सामान्य जिवनमा जोडेर लेख्ने प्रयास गर्छु ।
तपाईले http://gjagriti.blogspot.com/ बाहेक अरु पनि चलाउनुहुन्छ? अनि ब्लगिङ गर्न कत्तिको सजिलो छ त ?
यो मात्र हो,अरु ब्लग छैन । ब्लग लेख्न आफैमा त गाह्रो हैन तर लेख्ने बानी बसालेर त्यस्लाई निरन्तरता दिन चै अलिक गाह्रो छ ।
ब्लग पढेर पाठकले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ?
म लेख्दा सरल शब्द चयन गर्छु अनि मैले पाउने प्रतिकृयामा चाहिँ -"कस्तो सरल भाषामा लेखेको । म पनि लेख्ने गर्थे कहिलेकाहिँ आजकाल लेख्दिन तर फेरी शुरु गर्नुपर्ला ।" भन्नुहुन्छ ।
हरेक क्षेत्रमा आ-आफ्नै आचारसंहिता हुन्छ । यो जरुरी छ भन्दा पनि ब्लगरहरुले आफैंले चिन्तन गरेर बुझ्नुपर्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
नेपाली ब्लगरले आचारसंहिता कत्तिको पालना भएको पाउनुभएको छ ?
धेरैले गर्नुहुन्छ तर कतै कतै नगरेको पनि देखेको छु । जस्तै श्रोत नखुलाईदिने अनि आफ्नो बिचार भन्दा अरुको बिचार नसुन्नेहरु पनि देखेको छु ।
केहीले ब्लगिङलाइ नागरिक पत्रकारिता पनि भन्ने गरेको पाइन्छ, के ब्लगिङ नागरिक पत्रकारिता नै हो त ?
अवश्य पनि ब्लगगिङ नागरिक पत्रकारिता हो । आफ्नु व्यक्तिगत बिचार लेखेर पोष्ट गर्ने देखी लिएर कुनै सुचना प्रवाह गर्न ब्लगिङले महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको छ ।
अनि आफ्नो रुचिको विषयलाई ब्लगमा कत्तिको समाबेश गर्नु भएको छ ?
मैले धेरै ब्लग लेखेको त छैन तर लेखे जती चाहिँ प्राय: मेरो रुची कै बिषय नै हुन्छन ।
Comment by Amuna Chapagain on December 29, 2014 at 12:07pm
Congratulations Jagriti Jee... !!
Comment by Prakash Lamichhane on December 29, 2014 at 11:41am
Congratulations Jagriti ji...